Sacuudiga oo sheegay in ay burburiyeen sideed diyaaradood oo hubeysan oo ay soo gantay kooxda Xuutiyiinta | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Sacuudiga oo sheegay in ay burburiyeen sideed diyaaradood oo hubeysan oo ay...
Isbaheysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ee dagaalka ka wada Yemen ayaa Axadda maanta ah sheegay in ay burburiyeen sideed diyaaradood oo hubeysan oo ay soo gantay kooxda Xuutiyiinta ee taageerada ka hela Iran, waxaana ku jiray saddex lagu tuuray dhanka Saudi Arabia, sidaana waxaa baahiyay telefishanka dowladda.
Isbahaysigu ma uusan cayimin goobaha ku yaalla Sacuudiga ee la bartilmaameedsaday. Sabtidii, isbahaysigu wuxuu sheegay in 24-kii saac gudahood uu Isbahaysigu ku qabtay ilaa toddobo diyaaradood oo beegsanayay Khamis Mushait iyo mid loo waday Jazan, labada magaaladaba waxa ay ku yaallaan koonfurta Sacuudi Carabiya.
Xuutiyiinta, oo dagaal kula jiray isbahaysiga tan iyo bishii March ee 2015-kii, xilligaasi oo ciidamada isbahaysigu soo farageliyeen dagaallada sokeeye ee Yemen, ayaa dhowaan kordhiyay weerarrada gantaalaha ah ee ku duqeeyaan xuduudda, iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay ku weeraraan dhulka Sacuudiga.
Dagaalka ayaa sidoo kale ku sii xoogeystay gudaha Yemen, gaar ahaan gobolada Marib iyo Taiz.
Telefishannada ayaa soo xiganaya isbahaysiga oo ku macneeyay kororka weerarada Xuutiyiinta in ay sabab u tahay guulaha uu isbahaysigu ka soo hooyay gobolka Marib iyo sidoo kale waxa ay isbahaysigu ku tilmaameen “fasiraadda cadaawadeed” ee kooxda Xuuthiyiinta ku fasiratay go’aankii maamulka cusub ee Mareykanka uu bishii February liiska ururrada argagixsada kaga saaray Xuutiyiinta.
Mareykanka iyo Qaramada Midoobay ayaa xoojiyay dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo khilaafka, oo inta badan gobolka looga arko dagaal dadban oo u dhexeeya dalalka aadka u loollama ee Sacuudi Carabiya iyo Iran.
Previous articleAfhayeenka xukuumadda oo sheegay in Ra’iisul Wasaare rooble diyaar u yahay si wadidda wadahadallada mucaaradka.
Next articleSoomaaliya oo ka walaacsan jiheyn cusub oo ka timid maamulka madaxweyne Biden ee Mareykanka
Prof. Maxamed Cabdi Gandhi oo goor dhawayd ku geeriyooday magaalada Paris ee dalka Faransiiska.
War saxaafadeed wadajir ah oo caawa kasoo baxay Saaxiibada Beesha Caalamka ee Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay shirka wadatashiga ah uu iclaamiyay shalay Madaxweynaha...
Xukuumadda xil gaarsiinta oo digniin u dirtay danjirayeyaasha dalalka Caalamka,,,,,,
Agaasimaha Hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch Kenneth Roth ...